Tag: Fijinjana | Martech Zone
Zoma 27 Novambra 2015 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Mpankafy lehibe ny tondro fampisehoana maso izahay. Amin'izao fotoana izao, mandeha ho azy ny tatitra momba ny fanatanterahana isam-bolana amin'ny mpanjifanay, ary ao anatin'ny biraonay, manana efijery lehibe iray izahay izay mampiseho dashboard amin'ny fotoana tena izy ireo famantarana ny fahombiazan'ny mpanjifa amin'ny Internet. Fitaovana lehibe iray izy io - ampahafantaro anay foana hoe iza ny mpanjifa mahazo valiny ambony ary iza no manana fotoana azo hatsaraina. Na dia mampiasa Geckoboard aza isika izao, dia misy fetrany roa
Mailigen: mailaka sy SMS ary marketing ara-tsosialy
Zoma, Jolay 18, 2014 Alatsinainy Janoary 16, 2017 Douglas Karr
Tsara ny mahita izao tontolo izao fandefasan-kafatra miovaova amin'ireo mpampita vaovao tsy maintsy ampiasain'ny mpivarotra isan'andro. Ilaina indrindra amin'ireo sehatra marketing iraisana ireo ny fahaizana mifampiresaka, mandrefy ary mirakitra ny fihetsika asehon'ny marketing sy ny mpanjifanao. Martech Zone Ny mpamaky dia afaka mahazo famandrihana 45% OFF 6 volana ho an'ny drafitr'ireo mpividy 2500-5000 Mailigen amin'ny alàlan'ny rohy afiliana tafiditra ato amin'ity lahatsoratra ity! Mailigen dia manolotra marketing amin'ny mailaka, marketing amin'ny mailaka nateraka, fandefasana hafatra an-tsoratra